Wararkii ugu dambeeyay dagaal ka dhacay degmada Baraawe iyo sida ay xaaladda tahay - Bulshoweyn Online | Your Source Of News And Entertainment
Wararkii ugu dambeeyay dagaal ka dhacay degmada Baraawe iyo sida ay xaaladda tahay
Wararkii ugu dambeeyay ee saakay laga helaayo degmada Baraawe ee gobolka Sh/hoose ayaa sheegaya in xaaladda degmadaasi ay haatan tahay mid aad u degan, kadib dagaal muddo saacado ah socday oo xalay ka dhacay qeybo ka mid ah degmadaasi.
Dagaalyahano ka tirsan Al-shabaab ayaa habeenkii xalay weerar aan caadi ahayn kusoo qaaday xarumaha ay ciidamada dowladda Soomaaliya ka degan yihiin degmada Baraawe, iyadoona kadib uu halkaasi ka bilawday weerar toos ah.
Mas’uul ka tirsan maamulka degmada Baraawe oo aynu qadka teleefanka kula xiriirnay ayaa inoo xaqiijiyay in gebi ahaan degmadaasi laga saaray dagaalyahanadii Al-shabaab ee xalay weerarka kusoo qaaday.
Mas’uulkaasi ayaa sidoo kale inoo sheegay in dagaalkii xalay uu geystay qasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac.
Warar madax banaan oo aynu heleyno ayaa inoo xaqiijiyay in ku dhawaad 10 qof oo isugu jira dhinacyadii halkaasi ku dagaalamay iyo dad shacabka ah ay ku geeriyoodeen dagaalkaasi.
Sidoo kale, tiro dad kale ayaa la sheegayaa inay dagaalkaasi ku dhaawacmeen, waxaana dhaawacooda haatan lagu daaweynayaa xarumaha caafimaad ee ku yaala degmada Baraawe.
Dhinaca kale, ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya ayaa la sheegayaa inay saakay baaritaano aad u xoogan ka wadaan xaafadaha ay ka kooban tahay degmada Baraawe.
Ma jirto cid illaa iyo haatan baaritaankaasi lagu soo qabtay, waxayna xaaladda degmada Baraawe haatan tahay mid aad u degan marka loo eego dagaalkii xalay halkaasi ka dhacay.
Si kastaba ha ahaatee, dagaalyahanada Al-shabaab ayaa muddooyinkii ugu dambeysay kordhiyay weerarada ay ku qaadayaan xarumaha ay ku sugan yihiin ciidanka dowladda Soomaaliya, iyadoona inta badan weeraradaasi uu geysto qasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac.